Raha ny resadresaka nifaovana tamin’i Menakely Ruffin mpanazatra an’ity ekipa Malagasy ity tamin’izao fiverenan’izy ireo izao dia nambarany fa vonona ny handavo tanteraka ny ekipan’ny Aduana Stars Ghana ao amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga ny Fosa Juniors Boeny amin’ny lalao miverina hotontosaina ny alarobia 18 aprily ho avy izao. Eo am-pamolavolana paikady matotra hanatanterahana an’izany izahay ankehitriny, hoy ity mpanazatra ity, ary mbola manana herinandro katroka hanamasahana an’izany. Tsy te hampatsiahy ny zava-nisy niainana tamin’ny lalao mandroso tany Ghana teo aho, hoy ihany i Menakely, fa mankarary an-doha ny mieritreritra azy. Ny azo ambara fotsiny aloha dia tena niady tamin’ny fomba rehetra ry zareo Ghaneana tamin’ny nahatonga an’ireny. Hiady hatramin’ny farany koa isika aty Mahajanga ary manantena ny fanohanan’ny mpilalao faha-12 amin’izany.